Ungandibiza ngokuba nguPaul Simon - Izinto Zobugcisa
Ungandibiza ngokuba nguPaul Simon
USimon waqala ukurekhoda le ngoma eMzantsi Afrika, apho wayesebenza neemvumi zalapha ekhaya esenza amalinge ngezandi zazo. Warekhoda neemvumi ezininzi ezahlukeneyo ngelixa wayelapho, kwaye wayewuthanda umsebenzi wabafana abavela kwiqela lendawo elibizwa ngokuba yiStimela, isiginci sayo uRay Phiri esiza ne-riff yale ngoma ngexesha elinye leeseshoni zabo zejam. Olu rekhodi luhlelwe ndawonye eNew York ngumvelisi kaSimon uRoy Halee -umsebenzi omkhulu ngexesha lokurekhodwa kwe-analog, kuba eMzantsi Afrika, baqengqa iiteyiphu ezininzi ekufuneka uHalee azicwangcise ngothotho lweespisi.
Amagama aqulathe amagama antsonkothileyo abhalwe nguSimon ngocoselelo ujikeleze umkhondo, kunye nomlinganiswa okwingoma efuzisela amava akhe oMzantsi Afrika. Ngelo xesha, uMzantsi Afrika wahlulwe lucalucalulo, umgaqo-nkqubo owahlula abamnyama nabamhlophe, kwaye inkcubeko yenkcubeko yayikhona (jonga iiNgoma zeNgoma kwi 'Sun City'). USimon wakukhaba ngoyaba oku kwaye waya kunjalo, ethatha ubushushu obuninzi ngezenzo zakhe-nangona iinjongo zakhe zazintle, uninzi lweenkokheli ezimnyama eMzantsi Afrika zaziva ngathi nakuphi na ukwaphulwa komthetho kuthintela injongo yabo. Ngenxa yoqhankqalazo, umculo wale ndawo wawufihliwe, naxa kukhutshwa uSimon Ilizwe , wazisa umculo welizwe kwihlabathi. Kuxwebhu Phantsi kwesibhakabhaka saseAfrika USimon ucacisile: 'Ungandibiza ngokuba ngu Al' ngenene libali lomntu onjengam, oya eAfrika engenalo nofifi aze aphele enamava angaqhelekanga okomoya. '
Le ngoma imalunga nokuzingca komntu ozaziyo ezisingqongileyo. Kudliwanondlebe no-1990 Ingoma Yengoma USimon ucacisile: '' Ungandibiza ngokuba nguAl. Amagama alula kakhulu. Ke ine-chorus ongayiqondiyo. Uthetha ngantoni, ungandibiza ngokuba nguBetty, kunye noBetty, ungandibiza ngokuba nguAl? Awazi ukuba ndithetha ngantoni. Kodwa andicingi ukuba iyakhathaza. Awazi ukuba ndithetha ngantoni kodwa nam andiyazi ngelo xesha.
Ivesi lesibini ngokwenene liphindaphinda: Indoda ihamba isitalato, ithi ... enye into. Ngexesha lokufika kwivesi yesithathu, kwaye abantu sele bekwingoma ixesha elide ngokwaneleyo, ngoku ungaqala ukuphosa imifanekiso engabonakaliyo. Ngenxa yokuba bekukho ulwakhiwo, kunye nezo mifanekiso zingaqondakaliyo, baya kuhla baze bawele kwenye yeendawo zokubeka iingqondo esele zenzile malunga nobume bengoma.
Ke u-Al 'no' uBetty 'bavela phi kule ngoma? Oko kubangelwa liqela lowe-1970 uSimon awalibamba kunye nenkosikazi yakhe, uPeggy Harper. Umhlobo kaSimon, umqambi uStanley Silverman, weza nomnye umqambi ogama linguPierre Boulez, wathi xa ephuma, uBoulez wabiza uSimon 'Al' kunye nenkosikazi yakhe 'uBetty.' UBoulez wayengumFrentshi, kwaye wayengekho krwada-yayikukutolika kwakhe oko wakuvayo: Paul = Al, Peggy = Betty.
Unyana kaSilverman nguBen Silverman, umphathi kamabonwakude owayengumvelisi olawulayo wenguqulo yaseMelika IOfisi . Kwi-2011, uBen wagunyazisa umsebenzi owenziwe ngutata wakhe obizwa ngokuba yi-'Les Folies d'Al, 'kubandakanya ukwahluka kwe' Unganditsalela umnxeba Al 'kwaye kukuthumela eso sigameko.
Yayingowokuqala ongatshatanga Ilizwe , eyaphumelela iGrammy yeAlbhamu yoNyaka ngo-1988. Yayiyingoma yokuqala kaSimon ukusukela ngo-1980, xa 'uLate In the Evening' waya ku # 6 eMelika.
Eyona nto ibalaseleyo esinokuyixela, le yeyona nto ibalaseleyo yokufumana impempe yentsimbi. Yadlalwa nguJy Morr (Morris) Goldberg, umhlophe waseMzantsi Afrika owayehlala eNew York.
USimon wenze amalungiselelo okuba ezinye zeemvumi ezazidlala kule ngoma, kubandakanya isiginci uRay Phiri, umdlali webhasi uBakithi Kumalo kunye nomdlali wegubu u-Isaac Mtshali, beze eMelika, apho basebenza kwezinye iingoma zealbham kwaye baxhasa uSimon xa ebonakala NgoMgqibelo ebusuku , apho wenza le ngoma ngoMeyi 10, 1986, kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba icwecwe. Ezi mvumi kamva zahamba noSimon kuhambo lwakhe lwehlabathi Ilizwe .
Ividiyo ibonise uChevy Chase umlomo-uvumelanisa amazwi ngelixa uSimon ezenza ngathi udlala izixhobo ezahlukeneyo. Uninzi lweevidiyo ngelo xesha 'yayiziividiyo zokusebenza,' oko kuthetha ukuba iibhendi zazizakwenza ngathi ziyayidlala ingoma. Le vidiyo yenze umsebenzi omkhulu wokubagculela. Iklip yayikwabalulekile ngokulula kwayo - yadutyulwa kwigumbi elincinci, elingavathiswanga kusetyenziswa ikhamera enye.
Xa berekhoda iingoma zale ngoma eMzantsi Afrika, uSimon kunye nabavelisi bakhe babeqinisekile ukuba bayifumene le ngoma. Nangona Ilizwe icwecwe lenze kakuhle kakhulu, le ngoma yayiqala kancinci. Umntu ongatshatanga usebenze kakuhle e-UK, apho wenza khona i- # 4 ngo-Septemba 1986, kodwa eMelika, yagqitywa kwi # 44 ngo-Okthobha. Emva kokuba icwecwe kunye nevidiyo zifumene amandla, le ngoma yaphinda yakhutshwa kwakhona ngo-Matshi 1987, kwaye eli xesha laya kwi # 23 e-US. Kwakuyi-Top 40 yokugqibela yaseSimon eMelika.
U-Al Gore usebenzise le nto ngethuba esebenzela u-Sekela Mongameli ngo-1992.
Oku kuhambelana nomgca ovela kwingoma yomntu, 'Mzalwana, Ngaba ungasindisa i-Dime,' malunga nomfana oye wawa ngamaxesha anzima:
Bandibiza ngokuba nguAl
Kwakuyi-Al ngalo lonke ixesha.
Ndiyi pal yakho.
Mzalwana, awunakusindisa nesenti?
UAndy-Los Angeles, CA
IYunivesithi yaseFlorida ibhendi idlala ingoma ethi 'Ungandibiza Al' kuyo yonke imidlalo yebhasikithi kwaye uyenzile iminyaka eliqela. Isebenza kumxholo ongekho semthethweni kwiqela le-basketball. Icandelo labafundi kwi-O'Connell Centre (apho iqela lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola) libizwa ngokuba yiRowdy Reptiles kwaye ngelixa ingoma idlala abafundi bacula kunye no 'Da da da da, da da da da ...' behambisa izandla zabo ngomculo .
Kwi IOfisi Isiqendu 'Ukhuphiswano olunzima,' UJim noPam bamamela iingoma zomtshato ezinokubakho, kubandakanya uAndy kunye neqela lakhe leqela le-cappella lePachelbel's Canon ethi 'Ungandibiza Al.' UPam, edidekile, ubuza ukuba kufanelekile na ukuba aye ezantsi ngakwindlela kaSimon. UAndy uyaphendula, 'Ndithembe, awuyi kuhamba. Uya kuba ne-boogie-ing. '
Andikwazi kodwa ndifuna amazwi
oh angaba phi umntanam
Isandi somlilo johnny cash iingoma
Inye yeyona lizwi linelona loneli
Uzalelwe e-usa amazwi anentsingiselo
imvula enzima iya kuwa intsingiselo